सर्वेक्षणहरू घोटालामा भुक्तान गरिएको छ? | Ebuno
भुक्तानी सर्वेक्षण काम गर्दछ?
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणहरूले वास्तवमै काम गर्दछ र तपाईं यसमा केही थप पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। वास्तवमा, यो भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणको विचार होईन कि त्यसले घोटाला बनाउँदछ वा गर्दैन तर यसलाई सम्हाल्ने वेबसाइट हो। यी कम्पनीहरू हुन् जुन उनीहरूको उत्पादनहरू सम्बन्धी बिभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ प्राप्त गर्न चाहान्छन् ताकि तिनीहरू सुधार गर्न सकून् र एबुनो जस्ता वेबसाइटको लागि विनिमयमा प्रयोगकर्ताले उनीहरूको राय लिएर सर्वेक्षणलाई उत्तर दिन सक्नेछन्, कम्पनीले यसको लागि पैसा तिर्दछ र यस्तै। हामी तपाईलाई इनाम को एक उपयोगकर्ता को हिस्सा को रूप मा भुक्तान गर्न सक्छौं। अवश्य पनि, त्यहाँ धेरै समान कम्पनीहरू छन् जुन उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूसँग इमानदार हुँदैन र उनीहरूको फिर्ता रकम भुक्तान गर्दैन र त्यसपछि यसले मानिसहरूलाई चिन्ता उत्पन्न गर्न सक्दछ कि अनलाइन भुक्तानी गरिएको सर्वेक्षण अनलाइन गर्न नहुनुको लागि जब एकल कम्पनीमा घोटाला हुन्छ।
घोटाला साइटहरु लाई हटाउन को लागी सुझावहरु
त्यहाँ भुक्तानी सर्वेक्षण पृष्ठमा अन्त नहुने क्रममा पालना गर्नको लागि केही नियमहरू छन् जुन भुक्तान गर्दैन
सदस्यताका लागि भुक्तान नगर्नुहोस्
साइटहरूमा सर्वेक्षणमा भाग लिनको लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने खतरनाक हुन सक्छ। यो अनौठो हो कि एउटा वेबसाइट जसले सर्वेक्षण गर्न पैसा प्रकाशित गर्दछ त्यसमा जोडिनको लागि शुल्क लिन्छ। Ebuno जस्ता कम्पनीहरूले पनि भुक्तान गर्न सक्दछ जब एक प्रयोगकर्ताले एक सर्वेक्षण भर्छ र अधिक सर्वेक्षण गर्नको लागि प्रयोगकर्ताहरू संलग्न गर्दछ केवल साइन अप गर्न चार्जिंग भन्दा बढी लाभदायक हुन्छ। अवश्य पनि, सदस्यता शुल्क लिने सबै वेबसाइटहरू घोटाला हुनु आवश्यक पर्दैन, तर प्राय सबै मुख्य साइटहरूमा यो दर्ता गर्न र सदस्य हुन स्वतन्त्र छ।
वेबसाइटहरू जुन तपाईंले SEK ,०, SEK १०० वा अझ बढि छोटो सर्वेक्षणको लागि कमाउनु पर्छ भनेर दाबी गर्ने सम्भावना नै एक घोटाला हो। एउटा सर्वेक्षण कम्पनीले सानो सर्वेक्षणको लागि यति तिर्न सकिन सक्दैन किनभने उनीहरू उत्तरको लागि तिर्ने ठाउँमा कतै पुग्दैनन्। यो प्रयोगकर्ताहरूलाई सोच्नको लागि एउटा चाल हो कि उनीहरूले "धनी" पाउने सजिलो तरीका फेला पारेका छन्। तिनीहरू प्रयोगकर्तालाई १०-१-50 सर्वेक्षण लिन लगाउँदछन्, तर उनीहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता लिनु परेपछि यो सम्भव छैन। तपाइँले गरेको अनुसन्धानको लागी उचित इनाम पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न नबिर्सनुहोस्। अवश्य पनि, त्यहाँ वास्तविक सर्वेक्षणहरू पनि छन् जुन राम्ररी भुक्तान गर्न सक्दछ (१० मिनेटको लागि SEK to० सम्म)।
धेरै जसो सर्वेक्षणले वास्तवमा भुक्तान गर्दछ थोरै मात्रामा इनाममा र योग्य हुन तपाईलाई सर्वेक्षणको आवश्यकताहरू मेल गर्न आवश्यक छ। एबुनोमा तपाईं प्रोफाइल प्रश्नहरूको एक जोडी भर्न सक्नुहुनेछ ताकि प्रणाली स्वचालित रूपमा तपाईंलाई सर्वेक्षणमा मेल खानेछ जुन तपाईं योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
सधैँ के उचित र के उचित हो हेर्नुहोस्। यदि तपाइँ यसले कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर केही भागहरू फेला पार्नुभयो जुन अत्यधिक भुक्तानीहरू जस्ता उचित लाग्दैन, टाढा रहनुहोस्! सँधै आलोचनात्मक र सावधान हुनुहोस्, तर यो सधैं एक प्रयास लायक हुन सक्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि यस लेखले तपाईंलाई एक वास्तविकबाट एक नक्कली पृष्ठ कसरी छुट्याउने भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। अवश्य पनि, यो सँधै सजिलो हुँदैन, तर प्राय: केही अंशहरू हुन्छन् जसले तपाईंलाई विश्वसनीयता निर्धारण गर्न मद्दत गर्छन्।
यदि तपाईं सशुल्क सर्वेक्षणको बारेमा अधिक पढ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो गृहपृष्ठमा थप जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ!